I-Djibouti eVisa | Faka isicelo seVisa kwi-Intanethi | natvisa.com
Isicelo se-Visa esikwi-Djibouti
I-Djibouti Visa yincwadi ekwi-Intanethi enika imvume esemthethweni kumgcini wokubamba nokuhlala kwiRiphabhlikhi ye-Djibouti ngexesha elimiselweyo. Nge-visa ye-elektroniki (eVisa), umntu lowo akasayi kufuna i-visa eqhelekileyo e-Djibouti efunekayo kwindawo yokufika. Kwi-visa ye-Djibouti kwi-intanethi, umntu unokugcwalisa iinkcukacha ezisisiseko kwisicelo se-visa ye-Djibouti kwaye uhlawule online. Ngokwamkelwa kwesicelo, umntu lowo uzisa i-eVisa kwifomu ye-pdf nge-imeyile. Isetyenziselwa ukhenketho, ishishini okanye iinjongo zothutho hayi ngenxa yezifundo. Abasemagunyeni abanomda banokwala ukungena kuxhomekeke kwimeko.
Iindidi zeVisa yeJibouti
Abakhenkethi abakhenkethi Imeyli Iinyanga ze-3 Ukufikelela kwiintsuku ezingama-90 enye Faka isicelo ngoku
Ishishini le-eVisa Imeyli Iinyanga ze-3 Ukufikelela kwiintsuku ezingama-90 enye Faka isicelo ngoku
ITrans eTVisa Imeyli Iinyanga ze-3 Transit enye Faka isicelo ngoku
Abafakizicelo kwiVisa kuyakufuneka babe nencwadana yokundwendwela esemthethweni xa besenza isicelo se-Visa e-Djibouti. Ipaspoti kufuneka isebenzele ubuncinci iinyanga ezi-6 ukusukela kusuku lokufika komenzi-sicelo. Ipasipoti kufuneka okungenani ibe nephepha elinye elingasetyenziswanga ukuze igosa lolawulo lomda liyinyathele, ekungeneni nasekuphumeni kwabahambi. Abantu ababodwa kubandakanya abantwana kufuneka babe nencwadana yokundwendwela xa besenza isicelo se-eVisa e-Djibouti.
Ngaphandle kwencwadana yokundwendwela, amanye amaxwebhu ekufuneka aboneleli abafake izicelo zokufumana i-visa kungokwabo photoIkopi eneenkcukacha eneenkcukacha zobuqu yomenzi-sicelo ipaspoti, uhambo ngenqwelomoya, I ileta yesimemo kumamkeli okanye umbutho lowo utyelelayo umtyelelo, kwaye a ikhadi lamatyala.
Kukho inani leendawo umntu anokuhlala kuzo, e-Djibouti. Ukufumana i-Visa ukuya kumhlaba wesizwe i-Djibouti, ubungqina bendawo yokuhlala kufuneka buvezwe, obu bungqina bunokuba ihotele ebhalisiweyo, indawo yokuhlala, i-motel okanye naluphi na olunye ulungiselelo lwendawo yokuhlala umntu opter kuyo, ngexesha lokuhlala kwabo.
Isango lokungena elivumelekileyo nge-eVisa
Okwangoku, abahambi abanenjongo yokuhamba baye e-Djibouti nge-eVisa kuya kufuneka bangene kweli lizwe Isikhululo senqwelomoya eAmouli International kuphela. Kubaluleke kakhulu ukuba uqaphele ukuba esi kuphela kwesikhululo seenqwelomoya esamkela i-Djibouti eVisa.
Iinkcukacha ze-Djibouti Visa
Yintoni iVisa yabakhenkethi yaseJibouti?
Ukufumana i-visa yakho yesiqhelo ngokwesiko kuye kwaba yingxaki enkulu. Imigca emide kunye nokuthwala iphepha lakho lokujikeleza yinto ekungekho mntu ufuna ukujongana nayo. Ke ngoko ukwenza kube lula kubemi kwihlabathi liphela, iSebe leMfuduko lase-Djibouti lazise inkqubo yeVisa yabakhenkethi. Le yeyona ndlela ilula kunye noqoqosho yokufumana i-visa. I-eVisa yabakhenkethi ivumela iindwendwe ukuba zingene kwiRiphabhlikhi yeJibouti ngokusemthethweni kwezeshishini nangeholide. Ukufumana i-eVisa kukuvumela ukuba uhlale kweli lizwe ithuba leentsuku ezingama-90.
Inkqubo entsha ye-eVisa ilula kwaye inokuqhubekeka kwi-intanethi. Nje ukuba yamkelwe ifom yesicelo, iyaconjululwa kwaye i-imeyile ithunyelwe kuwe nge-imeyile yakho. Elona candelo lilungileyo lokufaka isicelo se-eVisa kukuba awunyanzelekanga ukuba ubeke ixesha lokudibana ne-ofisi yokufudukela kwelinye ilizwe okanye ubekhona apho ngokwasemzimbeni. Oku kugcina ixesha elininzi kunye nemali. Abemi balo naliphi na ilizwe banokufaka isicelo se-Djibouti eVisa ukusuka nakweyiphi na indawo.
Inyathelo elilandelwa ukuSetyenziswa kwi-Intanethi isicelo seJibouti Visa
Ukungeniswa kwe-eVisa kuyenzile yonke inkqubo yokufumana i-visa ilula kwaye kulula kubahambi. Le nkqubo inokugqitywa ngamanyathelo ama-3.
Gcwalisa ifom yesicelo seVisa: Ukuze uqalise inkqubo yevisa, kufuneka uqale ufumane ifom yesicelo efanayo. Le fomu ifumaneka ngokulula kwiwebhusayithi karhulumente. Uyacelwa ukuba ukhuphele kwaye ugcwalise ifom ngeenkcukacha ezichanekileyo. Iinkcukacha kwifom kufuneka zihambelane nezo zikupasipoti yakho, okanye ifom yesicelo inokukhatywa.
Ngenisa uxwebhu olufunekayo: Emva kokuba ifom yesicelo se-visa igcwalisiwe, kuya kufuneka ulayishe amaxwebhu afunwayo afunwayo. Qiniseka ukuba amaxwebhu askeniweyo acacile ukuze abasemagunyeni bakwazi ukufumana ulwazi abalukhangelayo.
Hlawula umrhumo weVisa: Inyathelo lokugqibela lenkqubo yokwenza isicelo se-visa yenza intlawulo. Unokwenza intlawulo usebenzisa idebhithi esebenzayo okanye ikhadi lekhredithi. Inkqubo yokuhlawula ayithathi ixesha elininzi. Nje ukuba wenze intlawulo, ifom yesicelo ingeniswa. Emva kokuba ifom iqwalaselwe kungekudala uza kwaziswa ukuba ngaba isicelo sakho se-visa samkelwe okanye saliwe.
I-eVisa isebenza kuphela kwabo banenjongo yokutyelela ilizwe ngohambo, ukhenketho okanye ishishini. Kwimeko, umfaki-sicelo unqwenela ukusebenza okanye ukufunda elizweni emva koko kuya kufuneka afumane i-visa yakhe ngokwesiko, oko kukuthi, kwindlu yozakuzo okanye kwindlu yommeli.
I-Djibouti eVisa ivumela ukungena kwabahambi ngokukodwa, okuthetha ukuba umntu ngamnye, kufuneka enze isicelo se-visa yabo ngokwahlukeneyo. I-visa ivumela iindwendwe ukuba zihlale elizweni iintsuku ezingama-90. Ukuba umntu ufuna ukwandisa indawo yokuhlala, baya kucelwa ukuba baphinde bafake isicelo se-eVisa.
Abahambi kufuneka bahlale bephethe ipasipoti yabo kunye nabo. Ukufika kwabo kwisikhululo seenqwelomoya i-Djibouti, kufuneka babonise ipasipoti yabo esebenzayo kunye ne-visa kwabasemagunyeni bokufika. Nangona i-visa ithunyelwa nge-imeyile kwii-ID zezicelo zabo bafake izicelo, bacetyiswa ukuba baphathe ikopi efanayo yokuhamba.
Abahambi nge-eVisa yabakhenkethi banokungena kweli lizwe kuphela kwisikhululo seenqwelomoya i-Ambouli International Airport.
Ngelixa i-eVisa ilona xwebhu lubaluleke kakhulu kwaye luyimfuneko ekuhambeni, ayizenzi ngokuzenzekelayo ukuba umhambi afanelekele ukungena kwilizwe lesizwe i-Djibouti. Ukuba abasemagunyeni abafudukela kwisikhululo seenqwelomoya bafumana nantoni na enokuthi ichasane nokhuseleko lukazwelonke kunye nomdla, umntu lowo unokubanjwa.
Amaxwebhu afunwayo ukuze ufaka isicelo seJibouti Visa ekwi-Intanethi
Ukuzalisa ifom yesicelo linyathelo lokuqala lokufumana iVisa. Abafake izicelo kufuneka baqiniseke ukuba yonke imibuzo ekwifom iphendulwa ngokuchanekileyo. Ukusilela ukwenza njalo kungakhokelela ekungavunyelweni kwivisa.
I-Visa iyakunikezelwa kubafaki-zicelo abanepasipoti eqhelekileyo esebenzayo kwaye ubuncinci beenyanga ezi-6. Ngokuxhomekeka kwiimeko ezichaziweyo, ukungena nokuhlala komntu lowo kuya kusebenza de kube lelo xesha. Iphepha-mvume lokundwendwela umntu ongena kwelinye ilizwe linikwa indawo yokuhlala kangangeentsuku ezingama-90. Abafaki-zicelo kufuneka bangenise ikopi yeskena sepasipoti yabo kunye nefom yesicelo.
Abahambi baya kucelwa banike iinkcukacha zezicwangciso zabo zokuhamba kubasemagunyeni abafudukayo. Oku kubandakanya ukufika kwabo okuqinisekisiweyo kunye nokubuya kwamatikiti. Olu xwebhu luya kubavumela ukuba babone ukuba ngubani na umntu ongena kweli lizwe, ngowuphi umhla kunye nendlela abaceba ukuhamba ngayo.
Abantu abafaka isicelo se-Visa yase-Djiboutian Electronic Visa (eVisa) kufuneka banike ubungqina bendawo yokuhlala e-Djibouti. Abafaki-zicelo kufuneka babonise amaxwebhu afanelekileyo endawo yokuhlala abebehlala kuyo, nje ukuba babe kweli lizwe. Iindawo ahlala kuzo zinokubhaliswa kwiihotele, iimotara, indlu yeendwendwe, indawo yokuhlala okanye nayiphi na enye indawo athe agqiba kwelokuba azihlalele.
Ikhadi letyala elisebenzayo liya kufuneka ukugcwalisa isicelo se-visa se-intanethi. Emva kokuba umenzi-sicelo egcwalise le fomu, baya kuyalelwa ukuba bahlawule online.
Iindwendwe ezivela kwindawo enomngcipheko weFever Fever ziya kufuneka zigonywe ngaphambi kokuba zityelele iJibouti. Kananjalo, kufuneka banikeze isatifikethi esibonisa ukuba abathwali naluphi na usulelo okanye abanaso isifo esibulalayo. Isizathu esisemva kwesi siqinisekiso kukuqinisekisa ukuba abahambi abazifumani kwimeko enzima ukuba bayagula ngexesha lokundwendwela kwabo kungekho mntu ubanyamekelayo. Kwanabo bahamba nenkampani kufuneka baveze isatifikethi sabo sonyango.
Yintoni iJibouti eVisa?
I-eVisa luxwebhu olukunceda ukuba ungene kwiRiphabliki yeJibouti ixesha elithile. I-eVisa inokufumaneka ngombane kwi-intanethi, kwaye umfaki-sicelo akufuneki ukuba aye naphi na apho ayichola khona. I-visa ikhutshwa ngokuyithumela kwi-imeyile yomenzi-sicelo kwaye emva koko iprintwe ngaphandle ukuze bayifumane ithenda kunye nencwadana yokundwendwela yabo xa befika e-Djibouti.
Yintoni endifuna ukuyenza ukufaka isicelo se-Veter elektroniki?
Xa ufaka isicelo se-eVisa yakho oya eJakouti, kufuneka ube nencwadana yakho yokundwendwela (ubuncinci buneenyanga ezi-6), ikhadi lakho letyala okanye ikhadi letyala, ileta yesimemo (evela kumamkeli okanye umbutho), ubungqina bendawo yokuhlala (ihotele okanye iadresi) yomamkeli wakho) kunye nokubhukishwa kwendiza yakho (okanye ezinye iindlela zothutho).
Zithini izibonelelo ze-eVisa?
I-eVisa ilunge kakhulu. Isusa uxinzelelo olunxulumene nevisa yemveli. Konke okudingayo kukunxibelelana kwe-intanethi kunye nedilesi ye-imeyile esebenzayo yokufumana uxwebhu lwe-visa ukuze uyiprinte. I-eVisa yenza yonke inkqubo yokuhamba ibe lula kwaye ilungele wonke umntu.
Ngubani onokucela i-eVisa?
Nawuphi na umntu ofanelekileyo onqwenela ukutyelela iRiphabhlikhi ye-Djibouti unokufaka isicelo se-eVisa. Isenokuba yeyokhenketho, ishishini, okanye izizathu zosapho. Ukuba usendleleni, unokufaka isicelo. Ukuba awuzi kwezi ndidi, kuya kufuneka uye kutyelelane ukuze wenze isicelo seVisa. Akunyanzelekanga ukuba ufake isicelo ukuba unesazululo, igosa, okanye incwadi yokundwendwela.
Ngaba kufuneka ndingene kwiRiphabliki ye-Djibouti ngalo mhla ucacisiweyo kwisicelo sam?
Hayi awunjalo. Ungahambela i-Djibouti naphi na xa ufuna ixesha elide njengoko liwela ngaphakathi kwexesha lokusebenza. Ubunyani bakho be-eVisa buqala ukusuka kumhla ochaziweyo kwisicelo sakho. Qiniseka nje ukuba uhamba ngaphambi komhla wokuphelelwa kwesicelo sakho. Ukuba uyasilela ukusebenzisa i-visa yakho ngexesha lokusebenza kwayo, awuzukuphinda uyisebenzise.
Olunye ulwazi olukwi-eVisa yam aluhambelani neenkcukacha kwipasi lam?
Hayi, kufuneka ungenise lolwazi olunye onalo kwipasipoti yakho kwisicelo sakho. I-eVisa yakho inxulumene nepasipoti yakho, kwaye xa amagosa okufudukela kwelinye ilizwe eskena ipasipoti yakho, ayizukulingana ne-eVisa yakho, kwaye enikezela ukuba le visa ayisebenzi. Ke, gcina ulwazi lungaguquguquki.
Ndifuna ukuhlala e-Djibouti ixesha elide kune-eVisa evumayo. Yintoni ekufuneka ndiyenzile?
Ukuba uhambela i-Djibouti kwaye unqwenela ukuhlala ngaphezulu kokunyaniseka kwe-visa yakho, unako. Kodwa kuya kufuneka ungenise isicelo kumapolisa endawo ukuze banokukunika imvume yokudlula i-visa yakho. Qaphela ukuba i-eVisa eya e-Djibouti yenzelwe ukhenketho kuphela. Ukuba ufuna ukwenza ezinye izinto ezinje ngesikolo okanye umsebenzi, kuya kufuneka uzifake isicelo kwindlu yozakuzo yase Djibouti okanye e-ofisini. Ukuba ugqitha kwi-visa yakho ngaphandle kokuthatha amanyathelo afanelekileyo, unokugxothwa, uhlawuliswe, okanye unqatshelwe ukuhamba i-Djibouti ixesha elithile.
Ndigqibile ukufaka isicelo. Kuza kuthatha ixesha elingakanani ukuba i-imeyile yam ithunyelwe nge-imeyile?
Uya kufumana uxwebhu lwakho lwe-eVisa kwi-imeyile yakho zingekapheli iintsuku ezintathu (3) zomsebenzi wesicelo sakho. Akudingeki ukuba wenze enye into emva kokungenisa isicelo. Nika nje i-Administrator iintsuku ezintathu zeshishini ukuba usebenze nge-visa yakho, kwaye yakuba ivunyiwe, imvume iya kunikwa i-visa kwidilesi ye-imeyile. Qaphela ukuba ngoLwesihlanu nangoMgqibelo ziintsuku zeempelaveki e-Djibouti.
Ndenza ntoni ukuba isicelo sam se-visa asivunyelwanga?
Ukuba isicelo sakho se-eVisa siyakhatywa, ungaya kwindlu yozakuzo yase Djibouti okanye umntu oza kugxothwa kufutshane nawe ukuze afake isicelo seVisa yemveli. Kufuneka kwakhona uqaphele ukuba umrhumo we-visa owuhlawuleyo xa wawusenza isicelo awusayi kubuyiswa ukuba imvume yakho ivaliwe. Nawuphi na umrhumo ohlawulelwayo ngexesha lesicelo usetyenziselwa ukuqhubekisa visa yakho.
Ingaba iVisa yam iyakuba semthethweni ixesha elingakanani?
Ubunyani be-eVisa yakho buqala ukusuka kumhla ufika kwiRiphabhlikhi yaseJibouti. Ubunyani be-eVisa yakho ayifani nexesha lokuhlala. Yonke into ichazwe kwi-visa yakho, ke qiniseka ukuba ufunda lonke ulwazi olunikiweyo. Kwaye xa usenza isicelo se-eVisa, qinisekisa ukuba ungenisa isicelo ubuncinci iiyure ezingama-72 ngaphambi komhla wakho wokuhamba.